by A. Inkundla
Hit the home run with these big bats baseballs for kids
Ngaba ufuna umnqwenyana wakho ukuba unqumle ngaphandle kwepaki? Emva koko qinisekisa ukuba xa beya kwiplatshi banalo ibhola elifanelekileyo. Into enye ukuyazi: Iilwanyana zentsha zilawulwa yi-USSSA 1.15 Imigangatho yeBat Performance Factor (BPF), umlinganiselo wendlela yokukhawuleza ibhola iphuma ngayo. Qinisekisa ukuba ulutsha lwakho olutsha ludibana ne-1.15 yeBPF esemgangathweni yokudlala okukhuselekileyo, okufanelekileyo. Ngaphandle kokufumana ixesha elide lokubetha umntanakho, omnye umlinganiselo ofuna ukwazi ukuba "uyanciphisa isisindo," umehluko phakathi kobude kunye nesisindo se-bat. Ngamafutshane, umkhulu wokunciphisa umthamo, i-lighter i-bat iyakulinganisa. Yiyiphi ibhet ekulungele ukuba i-slugger yakho? Sine-swing kunye neenqwelo eziphezulu zebhola zebhola, ngoko ke umntu wakho omncinci angayibetha phezu kocingo.
Xa umntwana wakho ekulungele ukuthatha ukubetha kwinqanaba elilandelayo, faka le-Easton MAKO Composite Youth Baseball Bat ekuqhubeni. Le bhet ehamba phambili ibona indawo enomnandi kakhulu, ngenxa yokwakhiwa kweThnology ye-Thermo Composite Technology. Yenziwe nge-alloy egqinsileyo evumela ukuba i-bat ilahle izixhobo ukusuka kwi-11 ukuya kwi -19, okwenza kube lula ukuhambisa ngaphezulu kombhobho ngokusebenzisa indawo yokushaya. Ukwakhiwa kwe-ConneXion emibini yelungelo lobunikazi libeka umda kwi-barrel, kukhulisa ukuhanjiswa kwamandla kunye nokuphelisa ukugudla, kunye nesibambo sisongwe kwi-Hyperskin Grip ephathekayo. Le bat is 1.15 yeBPF eqinisekisiwe.
ULouisville Slugger ngumdlali webhola enkulu yebhola yemidlalo yebhola, kunye ne-Youth Chat i-Catalyst yaseBatball Bat iya kunceda umntwazana wakho uthuthukise umlinganiselo wokuhlaziya kunye namandla. Eyakhiwe ukusuka kwiC1C Composite echaneke ngokugqithiseleyo nge-epoxy resin, le bethi ayikuboneleli nje i-pop eninzi, iyakhula ngokukhawuleza. I-bat isuswa kunye ne-patented Louisville Slugger End Cap eyanciphisa intshukumo kunye neengcibane zamandla kwimbhobho ukudala udibaniso lwe-bat-ball. Nge-7/8-intshi yokusingatha okuqhelekileyo kunye ne-synthetic leather grip, i-Catalyst inkulu kwizandla ezincinci, kwaye yi-1.15 ye-BPF eqinisekisiwe.
Ukuqhubela ibhola ngaphandle kwendawo kufuneka kudlulise isantya kunye nokulawula. Khetha i-Easton S500 Youth Baseball Bat ukuza kunceda i-slugger yakho ithuthuke. Ngokuxhomekeka kubude, le mijelo yokunciphisa i-bat isukela kwi -13 ukuya kwi -19. Nangona kukhanya kunye nokulinganisela, le bat ibuye ihlale ihlala, kubonga kwi-7050 yokwakha i-alloy aircraft. Umtya omncinci we-29/32-intshi we-inch ulungele ezandleni ezincinci, kunye neenkambiso zawo zokubambisa xa inkwenkwe yakho idibanisa ne-pitch. Kwakhona 1.15 i-BPF iqinisekisiweyo.
Ukuphucula imilinganiselo yakho yokubetha i-leaguer iqala ngebhodi elungeleleneyo njenge-Louisville Slugger Armor Youth Bat. Nge-12 isisindo sokulahla, le nto yecandelo elilodwa le-aluminium battery lilula kwaye kulula ukuguqula. Isibambo se-7/8-intshi esenziwe nge-synthetic grip sichitha i-sting, i-endcap ekunciphiseni i-endcap inceda ukudlulisela amandla kwibhola ekudibaniswaneni kwaye i-1.15 i-BPF iqinisekisiweyo.
Umnikelo ophakathi kwinqanaba lase-Easton's "SPEED Brigade" lwamatyala, i-Easton's S300 Youth Baseball Bat ibetha indawo entle kwixesha elikhawulezayo, amandla kunye nexabiso lentengo. Equlunqwe nge-alfadi ye-7046 eqinile, le bat ifezekisa ubunzima be-12, kodwa inzima ngokwaneleyo ukuyenza yonke ixesha. Isibambiso esincinci se-29/32-intshi sihlanganiswe kwi-Allon Grip ye-Easton ye-All Sports Grip ukuze idibanise izandla ezincinci ngokuqhagamshelana nebhola, kwaye ibhet isitifiketi esingu-1.15.
Le Rawlings Adirondack Youth Wood Bat yenziwa ngomthi othuliweyo, kangangokuthi inzima kune-aluminium yakho ephakathi, eyenza ibe yinto enkulu yokwakha amandla kunye nokukhawuleza. Umgqomo ophakathi ophakathi kwinqanaba elincinci lokubetha ngokuchanekileyo, kwaye isingatha esisodwa se-inch ububanzi obufanelekileyo bezandla eziselula nje kuqala ukuguqula ibhande ngamandla.
I-bamboo baseball bat? Ingangomva engekho i-American, kodwa iBamBooBat Youth Little League i-Bamboo Baseball Bat yindlela ehleliyo kwaye ilula kakhulu kubadlali abaneminyaka emihlanu ukuya ku-13. abayi kuphula i-bat yabo. Ziye zizintlu eziluhlaza kunazo zonke kwiimarike ukususela ku-bamboo ngumthombo ozinzileyo okhulayo okhulayo okhula kathathu ukuya kwesine ngokukhawuleza kunamaqabunga asebenzayo kwezinye iibhola zebhola. Le bhet iqinisekisiwe ukusetyenziswa kwiimidlalo ze-Little League ze-baseball.
Ukuba umntwana wakho omncinci usanda kuqalisa kwi-baseball musa ukulahla ingalo nomlenze kwi-bat abaza kuphuma ngexesha. Fumana i-bang buck yakho yeBuck kunye ne-Easton's S50 Youth Baseball Bat. Ngeemilinganiselo zokulahla ezivela kwi -10 ukuya kwi -19, ngokuxhomekeka kubude, ibhet iyanelisekile kubabethe abancinci. Yakhelwe nge-aluminium ye-air-grade ibhalansi kwaye inomxholo wokugqibela ogqityiweyo wokukhawulela ngokukhawuleza ngebhola. Isibambiso esincinci se-29/32-intshi kunye nomdlalo wezemidlalo kulungile kwizandla ezincinci, kwaye i-bat ibuye i-1.15 i-BPF ingqinisiswe.
Ingaba umfana wakho uqala ukungena kumdlalo? Yenza ukubetha kwendawo yangasese kwenziwe ngokuzonwabisa kunye nokukhuselekileyo ne-US Games Foam Bat. Le bat ibonakala ngokukhanya kakhulu (12 oz.) Kwaye ine-barrel 2 ¾-intshi, ukwenzela ukuba uqhagamshelane nebhola kulula kubadlali abancinane kakhulu. Le bhet nayo yenziwe nge-foam neoprene ukwenzela ukhuseleko. Le nto ibhola yokudlala kwaye ayiqinisekisiwe ukusetyenziswa kwimidlalo yebhola ye-baseball.
Ufuna ukuzisa umntwana wakho kumntwana waseMelika? Qala kubo kunye ne-POOF yasekhaya ye-Foam Home Run Bat kunye ne-Ball Jr., ukuze bahlekise ngaphandle xa beqala ukuphuhlisa ukujongana kweso. Kuya kufuneka badlale umdlalo xa bekhulile. Ibheji elincinane lifutshane kunye nombhobho omkhulu, okwenze kube lula kubantwana abancinci ukuba baqhagamshelane nebhola. Kuza ne-POOF ibhola lebhola le-foam, ukuze ukudlala i-baseball kukhuselekile, kwaye unokwazi ukudlala kunye ne-bat kunye nebhola kuseti echibini ngexesha lehlobo.
Ngaloo ndlela, abalobi bethu beengcali bazibophezele ekuphandeni nasekubhaliseni iimpendulo ezizimeleyo nezihleliweyo zeemveliso ezilungileyo kubomi bakho nakwintsapho yakho. Ukuba uthanda oko sikwenzayo, unokusinceda ngokusebenzisa iinqununu zethu ezikhethiweyo, ezithatha ikhomishini. Funda kabanzi malunga nenkqubo yokuhlaziya .
Imfundiso Engakholelwa Enkolweni: Ngaba Ikholelwa Kukho Inkolo?
Abaculi beNkokeli abaguqule iiBhanki zabo baza bahlawula igama legama
Ukuqonda Ukuhlaziywa Kwendlela
Imemori Yobuntwaneni Iza Kuphila Kanye 'Nokuba I-Grinch ibeke njani iiKrisimesi'